बिनोद र अनिताको तिहारटिका हस्पिटलभित्रै यसरी मनाए सबैले आँखाभरी आँशुझर्दै यस्तोसम्म भन्नेमनै रुवाउने(भिडियो) - Onlines Time
November 19, 2020 November 19, 2020 by onlinestime
निकै भलादमी देखिने पुरुषहरू पनि घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुदाँहुँदै बाहिरी सम्बन्धमा रहने, श्रीमती र छोराछोरीलाई दुःख दिने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने गरेका घटना आजभोली दिनहुँ जसो बाहिर आइरहेका छन् । यद्यपि बाहिर आएका घटना एकाध मात्रै हुन् । दोब्बर, तेब्बर घटना भित्रभित्रै लुकाइन्छन् । इज्जतको डरले बाहिर ल्याइदैनन् ।
तर गुल्मी धुरकोट, पिपलधार घर भएका विनोद खड्का भने एउटा यस्ता उदाहरणीय श्रीमान् हुन्, जसले श्रीमान् हुनुको महत्व र कर्तव्य दुवै कुरा प्रमाणित गर्दैछन् ।
विवाहको मण्डपमा अग्नीलाई साक्षी राखी, सात फेरा घुमेर, सात जन्म संगै हुन गरेको कबुल अनुसार निर्देशित छन् । उनलाई देख्ने जो कोहीले भन्छन्, ‘श्रीमान् हुन् त यस्तो ।’ २०७२ सालको बैशाख २४ गते विनोद र अनिता वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । त्यो मागी विवाह थियो ।
विनोद अहिले २७ वर्षका भ एभने अनिता २४ वर्षकी । उनीहरूको वैवाहिक जीवन राम्रोसंग चलिरहेको थियो । हाँसी खुसी थिए । विहेको २ वर्षपछि छोरी आहानाको आगमनले उनीहरूको खुसी झन् बढ्यो ।
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यसवर्ष ७१ सय ५० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ। मुस्ताङका किसानले यसवर्ष उत्पादन गरेको स्याउले ७१ करोड रकम आम्दानी गरेको छ।
जिल्लामा उत्पादन भएको ९० प्रतिशत स्याउ देशका विभिन्न बजारमा निकासी भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई मुस्ताङले जनाएको छ। गतवर्ष मुस्ताङमा ६५ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकोमा यसवर्ष ५ सय ५० मेट्रिक टन स्याउ बढी फलेको परियोजना कार्यान्वयन ईकाई मुस्ताङका प्रमुख डा. सुधिर थापाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार परियोजनाले मुस्ताङको थासाङ, घरपझोङ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा अवस्थित विभिन्न व्यक्ति तथा फार्महरुको स्याउ बगैचा सर्भेक्षण गरिएको जनाएको छ। मुस्ताङको तल्लोक्षेत्र थासाङको कोवाङ र टुकुचेमा विगतभन्दा केही कम मात्रामा स्याउ फलेको भए पनि जिल्लाको घरपझोङ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा भने विगतभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन भएको परियोजना ईकाई प्रमुख डा. थापाले उल्लेख गरे। मुस्ताङको थासाङमा मौसमी आद्रताका कारण स्याउमा प्रकोप देखिए पनि केही किसानले स्याउ बगैचा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकाले उत्पादन तथा गुणस्तरमा फरक नपरेको ईकाई प्रमुख थापाको भनाइ छ।
मुस्ताङमा स्याउ खेती गरिएको कुल क्षेत्रफल १४ सय हेक्टर भए पनि जम्मा ५ सय हेक्टर जमिनमा लगाइएको बोटले उत्पादन दिन्छ। मुस्ताङको अनुकुल हावापानी, स्याउ खेती विस्तार तथा प्रर्वद्धन, प्रविधिको विकास, स्याउमा लाग्ने प्रकोप नियन्त्रण र बगैचा व्यवस्थापनमा प्रगती भएकाले स्याउ उत्पादन वृद्धि भएको डा.थापाले उल्लेख गरे। किसानको स्याउ बगैचामै प्रतिकेजी एकसय रुपैयाँ बढीमा ठेक्का मार्फत बिक्री भएको छ। स्याउ उत्पादनले प्रसिद्ध हिमाली जिल्ला मुस्ताङको टुकुचे, कोवाङ, मार्फा, जोमसोम, कागबेनी छुसाङ र मुक्तिनाथ लगायतका स्थानमा व्यवसायिक रुपमा स्याउ खेती गरिएको छ।
Prev९६ वर्षका बुवालाई के भयो यस्तो…बीचरा यी दुई छोरीको यस्तो हालत कसरी ? भिडियो सहित हेर्नुस्
Nextजसले छिमेकी बालकलाई उप’चार गराउन मोटरसाइकलमा लगे दुर्घ’ टनामा उनकै गयो ज्या’न, बालक पनि बाँ’ चेनन्